मिर्गौला फेर्न ‘नक्कली’ नातेदार – Nepali Health
मिर्गौला फेर्न ‘नक्कली’ नातेदार
२०७४ फागुन २० गते ७:३६ मा प्रकाशित
भक्तपुर, २० फागुन । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न नक्कली नाता प्रमाणपत्र बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। मिर्गौलादाता बिरामीका आफन्त हुनुपर्ने प्रावधान लत्याउँदै नक्कली नाता प्रमाणपत्र बनाउनेको संख्या बढेको हो।
‘मिर्गौला दान दिने व्यक्ति निश्चित गरेर आएको खण्डमा सम्पूर्ण जाँच सकेर दिने र लिनेको मिर्गौला म्याच भए एक साताभित्रै प्रत्यारोपण हुन्छ’, कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले भने, ‘तर मिर्गौला लिने बढी आए दिने त्यसको तुलनामा कम छन्।’
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ईश्वरकाजी खाइजूको समाचार
फागुन २९ गतेदेखि अनसन बस्ने डा. केसीको घोषणा